नवौँ संशोधनपछिको जिज्ञासा
नवौँ संशोधन सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि बाधक बन्ने कुरामा विमति रहेन, तथापि संस्थागत विद्यालयको प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण दर ९० हुँदा सामुदायिकको २८ हुनु के राम्रो हो र ? प्रवेशिका परीक्षाको ८२ वर्षे (अक्षराङ्कन लागू नहुँदा) इतिहासमा सबैभन्दा बढी २७ वटा वर्षमा यसको उत्तीर्ण प्रतिशत ३० देखि ४० को बीचमा रहँदा राम्रै भन्न मिल्थ्यो र । सन् ९० को दशकदेखि शुरु भएका उपलब्धि परीक्षणका नतिजाले यसको कमजोर अवस्था उजागर गरेकै हुन् । शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले प्राथमिक शिक्षाको सिकाइ अवस्थाको विश्लेषण गरेकै छ । यस आधारमा हेर्दा समग्रमा हिजोका दिनमा सामुदायिक शिक्षा राम्रो थिएन । सामुदायिक शिक्षाको सुधारका लागि प्रभावकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ढिला भइरहँदा फेरि नवौँ संशोधनले यसलाई अझ पछाडि पार्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
नवौँ संशोधनबाट स्थायी हुने सबै शिक्षकका लागि पेसागत सहयोग र कक्षाकोठाको सिकाइ केन्द्रित तालिमको ढाँचा विकास गरी अनलाइन र अफलाइन ढाँचाबाट सघन रूपमा अनिवार्य तालिम लिनैपर्ने विकल्प हुन सक्छ । हालका अस्थायी शिक्षकमध्ये सबैभन्दा कमजोर प्राथमिक तहमा छन् । उनीहरूले लिएको तालिम पनि पुरानो भइसकेको अवस्था छ । केही नयाँ पद्धति विकास भएका छन् । कक्षा कोठामा तालिम कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखी कक्षा कोठाको सिकाइ केन्द्रित तालिम उपलब्ध गराउन सकिएला । औसत क्षमताका शिक्षकले विषयवस्तु पढाउनै नसक्ने अवस्था छैन तर जाँगर मरिसकेको छ, जवाफदेहिताको अभाव छ । पेसागत उत्तरदायित्व र नैतिकताका पक्ष पनि जिम्मेवार छन् । विद्यार्थीको सिकाइप्रति जवाफदेही बनाउने पद्धतिले सुधार हुन सक्छ ।
नवौँ संशोधनले कमजोर बनाउने भयो भन्दै गर्दा अझ जटिल केही पक्ष पनि छन् । ती के भने के अब नेपालमा अस्थायी शिक्षकको समस्या सदाका लागि समाधान
भयो ? राहत, पिसिएफ र निजी स्रोतका शिक्षकले फेरि अनशन बस्दा के गर्ने हो ? उनीहरूलाई यसैगरी स्थायी गर्ने हो ? नवौँ संशोधन अझै अपुरो छ । सबै खाले अस्थायी शिक्षकको एकैपटक व्यवस्थापन गरियोस् । मुलुकले यो समस्या सदाका लागि समाधान गरोस् । सधँै यहीँ बहानामा सामुदायिक शिक्षा अल्झिन नपरोस् र यही अल्झाइमा निजी शिक्षालय फस्टाउने अवसर नपाऊन् । शिक्षाले वर्गीय विभेद अन्त गरोस् । पचहत्तर होइन, असी किन नदिने तर ग्यारेन्टी होस्, यो समस्या सदाका लागि सकियो । अव विद्यालयमा अस्थायी शिक्षक हुँदैनन् । अब कसैले आन्दोलन गर्नु र अनशन बस्नुपर्दैन । सामुदायिक शिक्षा सुधारका लागि प्रभावकारी उपाय कार्यान्वयन गर्न ढिला भइसकेको छ ।